China Ink Remover BT-301/302 Manufacturer na Supplier | BGT
BT-301/302 bụ mmiri mmiri maka iwepu agba ọ bụla nke ihe PP na PE na-enweghị okpomọkụ dị mkpa.
Ọ bụ maka eyi Knitting Bag agbasi elu ebi akwụkwọ ink mkpochapu.
BT-301/302bụ mmiri mmiri maka iwepu agba ọ bụla nke ihe PP na PE na-enweghị okpomọkụ dị mkpa. A nwalere ya dabere na ink na-ebi akwụkwọ na akpa ihe nkiri ọ bụla ma n'ụlọ ma na mba ofesi. Ọ nwere ike ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè hichaa elu elu-ebi akwụkwọ ink na ndị ọzọ smudge na-eme ka gburugburu ebe obibi mmetọ na elu nke egweri eyi Knitting Bag na-alọta ọcha na-acha ọcha na agba nke ihe onwunwe.
Plastic na Rubber
Dị ka TDS
25kg / plastic ịgbà
Biko Attaa ntị:
1, ngwaahịa a ga-echekwara na evades ìhè ebe coolly.
2, Splashes akpachapụghị anya n'ime anya, biko jiri oke doro anya mmiri iwepụ.
3, The chịngọm chịngọm mkpa mgbe ọrụ.
Imirikiti nsogbu dị n'etiti ndị na-eweta ngwaahịa na ndị ahịa bụ n'ihi nkwukọrịta adịghị mma. Dị ka ọdịbendị si dị, ndị na-ebubata ihe nwere ike ịna-ajụ ajụjụ ihe ha na-aghọtaghị. Anyị na-agbaji ihe mgbochi ndị ahụ iji hụ na ị nwetara ihe ịchọrọ n'ogo ị na-atụ anya ya, mgbe ịchọrọ ya. Oge nnyefe ọsọ ọsọ na ngwaahịa ịchọrọ bụ Criterion anyị.
“Omume bụ nke mbụ na uru ọ ga-erubere”. Anyị na-ekwe nkwa na anyị nwere ikike ịnye ezigbo mma yana ngwaahịa dị mma maka ndị ahịa. Na anyị, nchekwa gị na-ekwe nkwa.
Anyị na-ele anya ịnụ olu gị, ma ị bụ onye ahịa na-alọghachi ma ọ bụ nke ọhụrụ. Anyị nwere olile anya na ị ga-ahụ ihe ị na-achọ ebe a, ọ bụrụ na ọ bụghị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo. Anyị ji onwe anyị elu na ọkaibe ahịa ọrụ na omume. Daalụ maka azụmahịa na nkwado gị!
(Maka nkọwa na TDS zuru nwere ike ịnye dị ka kwa arịrịọ site “Hapu Ozi Gi”)
Nke gara aga: Ezigbo Masterbatch BT-805/820
Osote: PITA Akwụkwọ mmado Remote BT-336
Ink Remover N'ihi Film akpa
Ink Remover N'ihi Pee
Ink Remover N'ihi eyi